Amaphaneli elanga: Konke okumele ukwazi ngakho | Green Renewables
Amaphaneli elanga: Konke okumele ukwazi ngakho
Ukuvuselelwa Okuhlaza | 01/04/2022 23:14 | Photovoltaic Solar Amandla
Mhlawumbe uzwile ngamaphaneli elanga, nokho, akuyona into esiyibona njalo futhi bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi basebenza kanjani. Kulokhu okuthunyelwe sizobuyekeza konke okufanele ukwazi ngakho ama-solar panel, asebenza kanjani futhi yiziphi izinzuzo zawo. Ake siqale.
1 Ayini amaphaneli elanga e-photovoltaic?
2 Asebenza kanjani amaseli e-photovoltaic?
3 Zingaki izinhlobo zamaseli e-photovoltaic akhona?
4 Yiziphi izinzuzo zokusebenzisa ama-solar panel?
5 Kungani kuwukuhlakanipha ukusebenzisa lawa maphaneli?
Ayini amaphaneli elanga e-photovoltaic?
Amaphaneli elanga asebenza njengomxhumanisi we sebenzisa ukukhanya kwelanga ukuze uthole amandla. Baguqula imisebe yelanga ngenxa yomphumela we-photovoltaic, ngokusebenzisa inqwaba yamangqamuzana, abizwa ngokuthi ama-photovoltaic cell.
Asebenza kanjani amaseli e-photovoltaic?
Ngokuxhuma leli ngqamuzana lelanga kumjikelezo kagesi futhi ngesikhathi esifanayo lithola imisebe yelanga, lokhu izokhipha imali yama-electron ezoqala ukuzungeza futhi ikhiqize imali yamanje.
Zingaki izinhlobo zamaseli e-photovoltaic akhona?
Njengamanje, kunezinhlobo eziningi zamaseli e-photovoltaic. Eziningi zalezi zihluka ngokubunjwa kwazo noma imvelo yazo.
Lapha ngezansi sizokwenza ukuqhathanisa phakathi kwamaseli e-multicrystalline silicon photovoltaic namaseli e-silicon e-crystalline.
I-Multicrystalline Silicon: Amaseli e-silicon e-Multicrystalline mahle kakhulu ekusebenzeni, nokho, aphansi kancane kune-silicon ye-crystalline, lokhu kubonakala ngokucacile ekukhanyeni okuphansi. Lezi zigqamile njengoba zishibhile kune-crystalline silicon.
I-Crystalline Silicon: Lawa maseli anenani eliphakeme kakhulu kunalawo ashiwo ngenhla, okusho ukuthi ukusetshenziswa kwawo akuvamile. Nakuba intengo yayo iphakeme, kanjalo nokusebenza kwayo nekhwalithi.
Yiziphi izinzuzo zokusebenzisa ama-solar panel?
Kusuka ku-Imagine Energy, owokuqala I-100% yenkampani yamandla elanga evela eSpainAmafomula amasha okusebenzisa amandla asetshenziswayo asetshenziswa, akhuthaza ukukhula kwamandla elanga avuselelekayo 100% azibophezele emvelweni. Ngale ndlela, ukuncika emandleni angcolisayo (njengegesi) kuyancishiswa. Ngenxa yezixazululo ezifana nalezo ze-Imagina Energy, imindeni noma izinkampani ezinquma ukufaka ama-solar panel ziyakwazi ukukhiqiza amandla azo emthonjeni wemvelo ongapheli njengelanga.
Kungani kuwukuhlakanipha ukusebenzisa lawa maphaneli?
Lona inketho enkulu yokufaka isicelo ekhaya nasezinkampanini, njengoba kuyinto engafinyeleleka ngokuphelele futhi eyenza ukonga okukhulu kumthethosivivinywa kagesi, ikakhulukazi ezinkampanini.
Ngaphezu kwalokho, kuwusizo olukhulu ukunakekela imvelo, ngenxa yokuthi amandla ewakhiqizayo ayiwo I-100% ikhiqizwa ngemisebe yelanga. Njengamanje, kwenziwa uphenyo oluhlukene ukuze kuthuthukiswe uhlelo futhi kwenziwe lobu buchwepheshe obusha bunikeze imiphumela engcono nsuku zonke ezidlulayo futhi ziphumelele kakhulu kunanamuhla.
Ngokungangabazeki, ubuchwepheshe busendleleni yokuvela futhi eminyakeni embalwa izindlela zendabuko zokukhiqiza amandla zizoyekwa ukusebenzisa lezi zindlela ezintsha, ngaphezu kokuzuzisa kakhulu abantu, eziwusizo olukhulu ukulwa nokungcola. Ngalokhu okuthunyelwe, ungaqonda yonke into mayelana namaphaneli elanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Amaphaneli elanga: Konke okumele ukwazi ngakho
Ukuhlobisa obhasikidi be-wicker